China Ladies iiglavu isikhumba iiglavu ngentsontelo yesikhumba kumvelisi kunye noMthengisi | Umlandeli
Amanenekazi egusha iiglavu zesikhumba ngentambo yesikhumba ngasemva
Umsebenzi, ukuhlwa ngokuhlwa, okanye ukunxiba imihla ngemihla! Le glavu inxibe kakuhle kule minyaka idlulileyo kwaye iya kuqhubeka ikukhonza emva kwexesha lonyaka.
Umsebenzi, ukuhlwa ngokuhlwa, okanye ukunxiba imihla ngemihla!，Ukhululekile kakhulu ngokulungeleleneyo kwaye kulula ukuyisebenzisa, jonga umhle kwaye uyathandeka. Le glavu inxibe kakuhle kule minyaka idlulileyo kwaye iya kuqhubeka ikukhonza emva kwexesha lonyaka.
● Inombolo yobugcisa: EL-025
● Umbala: Mnyama, beige kunye neminye imibala
Egqithileyo Ladies iiglavu zezikhumba zeegusha ezinemithungo ye wavy
Okulandelayo: Ladies iiglavu ezinxibe iigusha ezinesinqe sokuvala iqhosha
Ladies iiglavu isikhumba iigusha kunye Ithwathwa Umtya ...